FOREX လိုင်စင်တောင်အာဖရိက | တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ရယူပါ။ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူမည်၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ရယူပါ။ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း၊
တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင် - တောင်အာဖရိကမှ Forex လိုင်စင်ရယူပါ။
သင်သည်တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုပါကတောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိပြီးတတ်နိုင်သောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်။
●တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်ရယူပါ။
●တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်ကိုရယူပါ။
●တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်လျှောက်ထားမှု။
● Forex လိုင်စင်ကြေးတောင်အာဖရိက။
● Forex လိုင်စင်သည်တောင်အာဖရိကအတွက်ကုန်ကျသည်။
●တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ရယူခြင်း။
●တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ။
●တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ။
● Forex လိုင်စင်အတွက်တောင်အာဖရိကအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။
တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရရှိခြင်း၊ တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီခြင်း၊ တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရရှိခြင်း၊ တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရရှိခြင်း၊ တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီခြင်း၊ Forex ရရှိရန်ကူညီခြင်း။ တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများ၊ တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရအကြံပေးများ၊ တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရရှေ့နေများကတောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် Forex လိုင်စင်အတွက်ထောက်ခံမှုဖြင့်တောင်အာဖရိကအတွက်လိုင်စင်ကိုပေးခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်၊ တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအ ၀ င်တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ခအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးပါသည်။
တောင်အာဖရိကအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများနှင့်အတူတောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကလျှောက်လွှာကိုလက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၁၀၀% အောင်မြင်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်၏ဘဏ္Financialာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်နှင့်ကြားခံ ၀ န်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေ ၃၇ အရတောင်အာဖရိက၏ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုဘုတ်အဖွဲ့ (FSB) သည်တောင်အာဖရိက၏ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ superv ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ Forex စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဆုံးဖြတ်လိုသောပုံစံဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသောကုမ္ပဏီအတွက် FSB နှင့်ပါ ၀ င်သောအမျိုးအစား ၂ ဆုံးဖြတ်ချက် FSP လိုင်စင်လိုအပ်သည်။
တောင်အာဖရိကမြင်ကွင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာအဆင့်မြင့်ဒေသများဟုခေါ်သည်။ ဤရွေ့ကားခိုင်ခိုင်လုံလုံရွေ့လျားလယ်ကွင်း, highveld ဟုခေါ်တွင်နှင့် bushveld ဟုခေါ်တွင်သစ်ပင် -dabbed လယ်ကွင်းနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။
အရှေ့ဘက်၊ တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၌မဟာ Escarpment ဟုခေါ်သည့်တောင်စောင်းဒေသဖြစ်သည်။ Drakensberg (သို့မဟုတ်) Dragon's Mountain ဟုခေါ်သည့်အရှေ့ဘက်သို့ရောက်သောအားဖြင့်ပေ ၁၁,၄၀၀ မီတာ (၃,၄၇၅ မီတာ) ကျော်လွန်သောကြမ်းတမ်းသောအထွတ်အထိပ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ထူးဆန်းသည်မှာတောင်အာဖရိကသည်၎င်း၏အစွန်အဖျားရှိအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ Drakensberg တွင်အခြေချနေထိုင်သည်မှာ Lesotho ၏မိုးရွာသွန်းမှုနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ တောင်အာဖရိက၏ရေအနည်းငယ်သည်နှင်းဖုံးနေသောကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်နှင်းဖုံးနေသောအထွတ်အထိပ်များမှလာသည်။ များစွာသောလူအုပ်စုများသည်တောင်အာဖရိကကိုဖွဲ့စည်းသည်၊ တစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်သမိုင်းရှိသည်။ တိုင်းပြည်တွင်အာဏာပိုင်ဘာသာစကား (၁၁) မျိုးရှိပြီးအလွတ်သဘောပြောတတ်သူများစွာရှိသည်။ ဤလှပသောလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်တောင်အာဖရိကကို“ သက်တံတိုင်းပြည်” ကိုပေးသည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည်ဂီတနှင့် ပတ်သက်၍ စွမ်းရည်ရှိပြီးလူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကဒါ့အပြင်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာရပ်ဂ်ဘီ၊ ခရစ်ကက်၊ ဂေါက်သီးနဲ့ဘောလုံးကစားနည်းတွေပါ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တောင်အာဖရိကသည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျင်းပရန်အဓိကအာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည်အသားအရောင်ခွဲခြားမှုမှသည်သုက်ပိုးများအထိရေမွှေးများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ထိုနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာပိုင်ဆိုင်သော်လည်းကမ္ဘာ့သိပံ္ပသတ္တဝါ၊ ငါးနှင့်အပင်မျိုးစိတ် ၁၀% နီးပါးရှိပြီးကျောရိုးရှိသတ္တဝါနှင့်တွားသွားသတ္တဝါ ၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်နေထိုင်သည်။
တောင်အာဖရိကတဝိုက်ရှိသမုဒ္ဒရာများသည်လည်းသဘာဝဘေးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ယခုနှစ်အတွင်းတောင်အာဖရိကရေပိုင်နက် ၂,၀၀၀ ခန့်သည်တောင်အာဖရိကသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်။ အလားတူပင်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှအသိအမှတ်ပြုခံထားရသောဆာဒီနင်သည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသည့်ငါးမန်းများ၊ လင်းပိုင်များနှင့်ပျံတတ်သောသတ္တဝါများကိုဆွဲဆောင်သည့်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းတွင်ဇွန်လတိုင်းတွင်ပြေးနေသည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိသီးသန့်ဂိမ်းစတိုးဆိုင် ၉၀၀၀ နီးပါးကဲ့သို့ပင်မြောက်ဘက်ရှိကျော်ကြားသော Kruger အမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုသတိရပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောမြေနှင့်အဏ္ဏဝါဇုန်များနှင့်အတူ၎င်း၏ untamed ဘဝကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်အချက်များအရတောင်အာဖရိကသတ္တဝါများစွာသည်တရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်စီးနင်းခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆုံးရှုံးခြင်းများကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာရပြီးမျိုးစိတ်များစွာမှာမှောင်မိုက်ကြံ့၊ မြည်သံနှင့်အာဖရိကတောရိုင်းခွေးများအပါအ ၀ င်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ တောင်အာဖရိကသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်စစ်မှန်သောပွင့်လင်းသောနိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြုလုပ်စဉ်ကတည်းကလူကြိုက်များသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ လယ်ယာစီးပွား၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စုဝေးမှုတို့သည်တောင်အာဖရိကကိုပြည်မကြီးတွင်အကြီးမားဆုံးသောစီးပွားရေးဖြစ်စေသည်။ သို့သော်အလုပ်လက်မဲ့များ၊ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်ပြwithနာများသည်အစိုးရအတွက်ကြီးမားသောအခက်အခဲများဖြစ်စေသည်။ တောင်အာဖရိကမြောက်ပိုင်းတွင်ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်နှင့်နီးစပ်သောစတာဖန့်ဖိန်းဟုခေါ်သောဥမင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသည်။ ဤလိုဏ်ဂူများအတွင်း၌ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များသည်တွေ့ရှိရသည့်အကြွင်းမဲ့အချိန်အများဆုံးလူ့ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အချို့မှာနှစ်ပေါင်း ၂ ဝဝဝဝဝဝထက်ပိုသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်ခရိုင်ဖြစ်သော“ Humankind ၏ပံ့ပိုးမှု” ဟုခေါ်သောတီထွင်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၄၀၀၀ ခန့်က San, သို့မဟုတ် Bushmen ဟုလူသိများသော tracker ရှာဖွေသူများ၏လူမျိုးနွယ်စုများသည်တောင်အာဖရိကသို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ မြောက်မြားစွာသောစန်းများသည်သူတို့၏အစဉ်အလာများကဲ့သို့ပင်အမှန်တကယ်တွင်အနောက်မြောက်ဘက်ရှိကာလာဟာရီသဲကန္တာရတွင်နေထိုင်ကြသည်။
၁၄၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းတွင် Far East သို့သွားသောဥရောပလှေများသည်တောင်အာဖရိကကမ်းရိုးတန်းတွင်စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ၁၆၅၂ ခုနှစ်တွင်နယ်သာလန်သည် Cape Town ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Boers ဟုခေါ်သောဒတ်ခ်ျ ranchers သည်မြို့ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေစွာစတင်ခဲ့သည်။
၁၈၀၆ ခုနှစ်တွင်ဥရောပတိုက်ပွဲများသည်ဗြိတိသျှတို့အားကိပ်တောင်းပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၀ တွင်ဗြိတိသျှသည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိပြည်နယ် ၄ ခုသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတောင်အာဖရိကကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်မှောင်မိုက်သောတောင်အာဖရိကမှလူဖြူများကိုသီးခြားခွဲထုတ်သည့်ဥပဒေများချမှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံရေးအရပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟုခေါ်သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာအချေအတင်ပြောဆိုမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံရေးအရပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုဆန့်ကျင်သောအာဖရိကအမျိုးသားကွန်ဂရက်မှနယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုလေ့ကျင့်မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ တွင်သူသည် ၂၇ နှစ်လုံးလုံးအနိုင်အထက်ပြုခြင်းခံရပြီးနောက်သမ္မတ FW de Klerk မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ တွင်မင်ဒဲလားကိုတောင်အာဖရိကခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တောင်လတ္တီတွဒ် ၂၂ ဒီဂရီမှ ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် ၁၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၃၃ ဒီဂရီစင်တီမီတာကိုဆန့ ်၍ တောင်အာဖရိက၏မျက်နှာပြင်သည် ၁ ၂၁၉ ၆၀၂ ကီလိုမီတာ ၂ ရှိသည်။
အမှန်တကယ်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းများသည်ချုံဖုတ်၊ မြက်ခင်းပြင်၊ သစ်တောများ၊ သဲကန္တာရများနှင့်အလွန်ကြီးမားသည့်တောင်ထိပ်များမှကျယ်ပြန့်သောယူနိုက်တက်ကမ်းခြေနှင့်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းများအထိအထိရှိသည်။
နိုင်ငံသည်နမီးဘီးယား၊ ဘော့ဆွာနာ၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ မိုဇမ်ဘစ်နှင့်ဆွာဇီလန်တို့အားပုံမှန်ကန့်သတ်ချက်များပေးထားသည်။ လီဆိုသိုတောင်တန်းသည်တောင်အာရှ - တောင်အာဖရိကဒေသရှိကုန်းတွင်းပိတ်မြေဖြစ်သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်တောင်အာဖရိကမှမင်းသားအက်ဒွပ်နှင့်မာရီယန်ကျွန်းများသည်ကိပ်တောင်း၏အရှေ့တောင်ဘက် ၁,၉၂၀ ကီလိုမီတာတွင်တည်ရှိသည်။ နိုင်ငံ၏ရေလမ်းကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာသည်ငွေရေးကြေးရေးအရလုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့်ကမ်းခြေအလွန်ကြီးမားသောကမ်းခြေများဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ကမ်းခြေများအနေဖြင့်ဆိပ်ကမ်းများအဖြစ်ခွင့်မပြုပါ။
Orange River သည်တောင်အာဖရိက၏အကြီးဆုံးမြစ်ဖြစ်သည်။ Drakensberg တောင်တန်းများသို့တက်သောအခါ၊ လီဆိုသိုကုန်းမြင့်ကို ဖြတ်၍ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့မ ၀ င်မီအရှေ့ကိပ်နှင့်လွတ်လပ်သောပြည်နယ်အကြားကာလီဒွန်မြစ်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးနမီးဘီးယားနှင့်အစွန်အဖျားကိုပုံသွင်းသည်။
အခြားသိသာထင်ရှားသောစီးဆင်းမှုများမှာ Vaal၊ Breede၊ Komati, Lepelle (Olifants ပြီးသား)၊ Tugela, Umzimvubu, Limpopo နှင့် Molopo တို့ပါဝင်သည်။ တောင်အာဖရိက၏မျက်နှာပြင်ဇုန်သည်သိသိသာသာဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအမျိုးအစားခွဲခြားမှုနှစ်ခုခွဲခြားထားသည် - အတွင်းအဆင့်နှင့်အဆင့်နှင့်ကမ်းခြေအကြားရှိမြေယာ။
ဤနယ်မြေနှစ်ခုအကြားကန့်သတ်ချက်ကိုပုံသွင်းခြင်းသည်မဟာ escarpment ဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာ၏အထက်အမြင့်သည်မီတာ ၁,၅၀၀ ခန့်မှသည်အနောက်တောင်ဘက်ရှိ Roggeveld scarp ရှိအမြင့် ၃၈၂၂ မီတာအထိရှိပြီး KwaZulu-Natal Drakensberg တွင်တည်ရှိသည်။
တောင်စောင်းမှကုန်းတွင်းပိုင်းသည်အဆင့်အတန်းတည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်နှိုင်းယှဉ်။ မရသောအာဖရိကအဆင့်၏မြောက်ဘက်တွင်ဆာဟာရသဲကန္တာရအထိတိုးချဲ့နေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀၀ မီတာအမြင့်ရှိသောသမုဒ္ဒရာအထက်ရှိကျယ်ပြန့်သောလယ်ကွင်းများအကြောင်းဖော်ပြသည်။ သမုဒ္ဒရာအထက် ၃၀၀၀ မီလီမီတာထက်ပိုသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသည့်လီဆိုသိုအဆင့်သည်အလွန်မှားယွင်းနိုင်သည်။
မဟာ Escarpment နှင့်ကမ်းရိုးတန်းအကြားအရှေ့နှင့်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ ၈၀ မှ ၂၄၀ ကီလိုမီတာနှင့်အနောက်ဘက်တွင်ကီလိုမီတာ ၆၀ မှ ၈၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်မျိုးတွင်မဆိုသိသာထင်ရှားသောဒေသသုံးခုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် - အရှေ့ဘက်တွင်အနိမ့်အမြင့်၊ ကိပ်ပြိုကျခြင်း၊ အိမ်နီးနားချင်းဒေသများနှင့်အနောက်ဘက်စောင်းများဖြစ်သည်။
တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည်များ
Forex လိုင်စင်တောင်အာဖရိကအတွက်အခမဲ့အကြံပေးခြင်း၊ တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်ရရှိခြင်း၊ တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်ရယူခြင်း၊ တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ တောင်အာဖရိက၊ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုရယူပါ၊ တောင်အာဖရိက၊ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုရယူပါ၊ တောင်အာဖရိက၊ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိက၊ တောင်အာဖရိက၊ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထား၊ တောင်အာဖရိကလိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါတောင်အာဖရိက၊ တောင်အာဖရိက Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ၊ တောင်အာဖရိကကို Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ။ တောင်အာဖရိက Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ တောင်အာဖရိက Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်တောင်အာဖရိက၊ Forex လိုင်စင်လဲလှယ်တောင်အာဖရိက, Forex လဲလှယ်လိုင်စင်ရယူ တောင်အာဖရိက၊ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ။ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကတွင်အသုံးပြုသည်။ Forex လဲလှယ်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိက။ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကတွင်အသုံးပြုသည်။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုကူညီမလဲ။
တောင်အာဖရိက၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်ကိုဆက်လက်မရယူမီလုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်း၊ KYC နှင့်သင့်လျော်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း။
တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ရရှိရန်လျှောက်လွှာနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ပါ။
လိုင်စင်ချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
လိုင်စင်ရ FSP ဖြင့်နှစ်စဉ်ကောက်ခံသောကောက်ခံမှုမှာ FSB မှစုစုပေါင်းပရီမီယံစုစုပေါင်း (စာရင်းစစ် / စာရင်းကိုင်အရာရှိဖော်ပြသည့်အတိုင်း) နှင့် FSP ၏အဓိကပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်အပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။
တောင်အာဖရိကအတွင်းနှင့်အပြင်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီများသည် FSB လိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
အမျိုးအစား II လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်မြင်ရန်နှင့်ဒေသန္တရဘဏ်တစ်ခုတွင်စိစစ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအလွန်အကျွံလိုအပ်ခြင်း၊ FSB နှင့်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်လျှောက်ထားသူကိုတောင်အာဖရိကတွင်ရှိနေခြင်းတို့လိုအပ်သည်။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သူသည်အဆိုပြုထားသောကုမ္ပဏီ - လျှောက်ထားသူ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ခန့်အပ်ထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် / အဖွဲ့အစည်းအားလုံး၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်သမိုင်းကိုအနီးကပ်ဆန်းစစ်လိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းတာ ၀ န်ကိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက်အနည်းဆုံးသောအဓိကပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်လိုက်နာရမည့်အရာရှိတစ် ဦး ကိုခန့်အပ်ရမည်။ တစ် ဦး ချင်းစီကို FSB တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ထိရောက်စွာပါ ၀ င်နိုင်ရန်အတွက်အနည်းဆုံးသော့ချက်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သည်တောင်အာဖရိကတွင်နေထိုင်ရမည်။ အဓိကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်သည်တောင်အာဖရိကသို့မဟုတ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုံမှန်ကျင်းပသောစည်းမျဉ်းစာမေးပွဲများကိုအောင်ရမည်။
လိုင်စင်ရသူသည်ကန ဦး အရင်းအနှီးငွေထည့်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်ထပ်မံအသုံးပြုရန်အတွက်ဒေသခံဘဏ်စာရင်းတစ်ခုရှိရမည်။
လိုင်စင်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်တင်းကြပ်သောဥပဒေပြreporting္ဌာန်းခြင်းဆိုင်ရာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လိုက်နာရမည့်အရာရှိမှပုံမှန်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် FSB သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့် Forex လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကကိုလိုင်စင်ချပေးတာလဲ။
တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်နှင့်တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ရများဟုလည်းသိကြသောတောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးသားသောအားထုတ်မှုနှင့်သင်၏ Forex လိုင်စင်ရရှိရေးအတွက်အထောက်အပံ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားကိုးနိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အာဖရိကနှင့်“ သင်၏ဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငွေထက်ပိုအရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဝင်ငွေရရှိသောကြောင့်ငွေသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝင်ငွေရကြသော်လည်းသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ အများအပြားထပ် client များနှင့်ရည်ညွှန်း။ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုစျေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်စျေးပေါတဲ့လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကြောင့် Forex လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကမှာရှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲကနံပါတ် ၁ ကိုရွေးချယ်တာပါ။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုစျေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်စျေးပေါတဲ့လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကြောင့် Forex လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကမှာရှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲကနံပါတ် ၁ ကိုရွေးချယ်တာပါ။
တောင်အာဖရိကတွင်စျေးအသက်သာဆုံး Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ဈေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ၊ ဈေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ဈေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည် တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအကြံပေးများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ။
သိရန်လိုအပ် - တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်အတွက်ထူးခြားချက်များနှင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ
တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အချက်အလက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များ
အနည်းဆုံး (၂ ယောက်) အဓိကပုဂ္ဂိုလ်များ
Professional လျော်ကြေးအဖုံး - လိုအပ်သည် (R5 million Rand (USD 350,000) ခန့်။
တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ရရှိရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တောင်အာဖရိကတွင်ငွေခဝါချခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး Forex လိုင်စင်ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သော Client များကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ငါတို့နောက်လိုက်တယ် FATF စည်းမျဉ်းများ တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်တင်းကြပ်စွာ။
တောင်အာဖရိက၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
Forex လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတောင်အာဖရိကကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ရယူပါ.
တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း (သို့) အမှားလုပ်ရန်ကိရိယာများသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်ပါ Forex လိုင်စင်လျှောက်ထား တောင်အာဖရိကနှင့် Forex License South Africa တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Forex လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားမထောက်ပံ့ပါ။ Forex လိုင်စင်ဆည်းပူး တောင်အာဖရိကအတွက်။
တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်တစ် ဦး ချင်းစီ (သို့) မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီလိုသည်။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်ကိုအီးယူနှင့်ကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုတောင်အာဖရိကရှိကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်လိုသူများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားတောင်အာဖရိကရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုများမဟုတ်ပါ Forex လိုင်စင်တောင်အာဖရိကရှိကမ်းလွန် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကပေးအပ်သော Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်တောင်အာဖရိကရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် Forex လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည်မဟုတ်သကဲ့သို့ တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
တောင်အာဖရိက၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Securities Dealers License လုပ်ငန်းကိုအောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစား (များ) ကိုမထောက်ပံ့ပါ။
လုံခြုံရေး၊ ရောင်းဝယ်သူများအတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတောင်အာဖရိကကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers License ကိုရယူပါ.
Securities Dealers များအတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်အာဖရိက၏လိုင်စင်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ Securities မှရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်လျှောက်ထား တောင်အာဖရိကနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Securities Dealers လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်အာဖရိကတွင် Securities Dealers လိုင်စင်တွင်သုံးပါ။
Securities Dealers လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers License လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားတောင်အာဖရိကသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Securities မှရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်ဆည်းပူး တောင်အာဖရိကအတွက်။
တောင်အာဖရိက၏ Securities Dealers များလိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers License ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
တောင်အာဖရိကရှိ Offshore Forex လိုင်စင်ရလိုသူများနှင့်တောင်အာဖရိကတွင်ရှိသောအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သူများနှင့်တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers များလိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offshore Securities ကားရောင်းဝယ်သူများအတွက်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုတောင်အာဖရိကရှိကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်ရှိကမ်းလွန် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည့်စက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားအာဖရိကကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကပေးအပ်သောတောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုလူ့အခွင့်အရေးနှင့်တိရစ္ဆာန်များရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုရောင်းသူ၊ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်တောင်အာဖရိကရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် Securities မှရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး တောင်အာဖရိက၏လုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ.
တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာမဟုတ်သလို၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
တောင်အာဖရိက၏ Forex Brokerage လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားအောက်ပါအမျိုးအစား (များ) သို့မထောက်ပံ့ပါ။
Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတောင်အာဖရိကကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
တောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်လုပ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ Forex ပွဲစားလိုင်စင်လျှောက်ထား တောင်အာဖရိကနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်အာဖရိကတွင်သုံးပါ။
Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသူများသည်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်တောင်အာဖရိကကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုဆည်းပူး တောင်အာဖရိကအတွက်။
တောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီလိုသည်။
တောင်အာဖရိကရှိကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်ရချင်သောတောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကို EU နှင့် Offshore Forex ပွဲစားလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုတောင်အာဖရိကရှိကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်တောင်အာဖရိကအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများကိုပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ Forex Brokerage License တောင်အာဖရိကရှိကမ်းလွန် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားအာဖရိကကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကပေးအပ်သောတောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်တောင်အာဖရိကရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ တောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
တောင်အာဖရိကရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး တောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ တောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
တောင်အာဖရိက၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Exchange လိုင်စင်ကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
Forex လဲလှယ်ခြင်းအတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတောင်အာဖရိကကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
Forex လဲလှယ်ရေးအတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်အာဖရိက၏လိုင်စင်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ Forex လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်ထား တောင်အာဖရိကနှင့် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Exchange လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားခွင့်မပြုပါ။ Forex လဲလှယ်လိုင်စင်ဆည်းပူး တောင်အာဖရိကအတွက်။
တောင်အာဖရိက၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီလိုသည်။
EU နှင့် Offshore Forex လဲလှယ်ခြင်းတောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ရေးအတွက်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုတောင်အာဖရိကရှိကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်ရလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအားတောင်အာဖရိကအတွက် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ တောင်အာဖရိကတွင် Forex Exchange လိုင်စင်ရှိ Forex License ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားအာဖရိကကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကတောင်အာဖရိကတွင် Forex Exchange လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်အာဖရိကတွင် Forex Exchange လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်တောင်အာဖရိကရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် Forex လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ တောင်အာဖရိက၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ။ တောင်အာဖရိက၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
တောင်အာဖရိကရှိ Forex Exchange လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမရှိကြပါ။ တောင်အာဖရိက၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် တောင်အာဖရိကမှာ Forex လိုင်စင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်ကိုရယူရန်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုမီထို site အသုံးပြုသူများအားသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် Forex လိုင်စင်တောင်အာဖရိက။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အပြင်၊ အောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများနှင့်တရားစီရင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်လိုင်စင်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။
တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်နှင့်တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားသောအခါတောင်အာဖရိကတွင်လိုင်စင်နှင့်စတင်သော်လည်းတောင်အာဖရိကတွင် HR အထောက်အပံ့အထိကျယ်ပြန့်သောအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ တောင်အာဖရိကတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုဖွင့်ခြင်း။
တောင်အာဖရိကရှိအကောင်းဆုံး Securities Dealers လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ တောင်အာဖရိက၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကတွင်အကောင်းဆုံး Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ တောင်အာဖရိကရှိ Forex Brokerage License အတွက်တောင်အာဖရိကရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ တောင်အာရှ Forex ဖလှယ်ခွင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ။ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အာဖရိကတိုက်၊ အကောင်းဆုံးအတွက်အကြံပေးများ၊ Fore အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ x တောင်အာဖရိကတွင်လိုင်စင်လဲလှယ်ခြင်း၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ရေးအတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ။
တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်နှင့်အတူ
တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်အခြားထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
တောင်အာဖရိကအတွက်လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းမှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာ!
ငါတို့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု တောင်အာဖရိကနှင့် ၁၀၈ နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများသည်လည်းကူညီနိုင်သည် ဘဏ်အကောင့် တောင်အာဖရိကနှင့် ၁၀၈ နိုင်ငံတို့တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း
တောင်အာဖရိကအတွက်လိုင်စင်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်လမ်းညွှန်မှုကိုလည်းပေးသည် အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ.
VoIP ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည် ဖုန်းနံပါတ် တောင်အာဖရိကနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရည်အသွေးနှင့်အတူဖောက်သည်များ။
လိုအပ်ပါတယ် ရောင်းရန်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တောင်အာဖရိကတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရကိုယ်စားလှယ်များသည်သင့်အားတောင်အာဖရိကရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် သင်၏ Forex လိုင်စင်ပြီးနောက်တောင်အာဖရိကရှိအတိုင်ပင်ခံများသည်အထူးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
Forex လိုင်စင်အပြင်တောင်အာဖရိကအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုပြည့်စုံသောအထောက်အပံ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ခြင်း တောင်အာဖရိကမှာ။
အကောင်းဆုံး တောင်အာဖရိကရှိစာရင်းကိုင် တောင်အာဖရိကအတွက်စာရင်းကိုင်အထောက်အပံ့အတွက် ၂၄ * ၇ ကိုရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံမှငွေစာရင်းများပြင်ပ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
များအတွက်အတန်းထောက်ခံမှုအတွက်အကောင်းဆုံး အဆင်သင့်ကုမ္ပဏီ တောင်အာဖရိကနှင့် 109 နိုင်ငံများတွင်တည်ရှိသည်။
ကိုလိုက်ရှာသည် လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တောင်အာဖရိကသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၀၇ နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏အဓိက ၀ န်ထမ်းများကိုတောင်အာဖရိကတွင်နေရာချထားရန်နှင့်ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည် အလုပ်ဗီဇာ တောင်အာဖရိကအတွက်ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်စွာကူညီနိုင်ခဲ့သည် web development တောင်အာဖရိကနှင့် blockchain၊ IOT၊ ဝက်ဘ်၊ အီလက်ထရွန်နစ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအရည်အသွေးအဆင့်ရှိကြသည်။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ပညာရှင်လမ်းညွှန်
တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ရယူခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်
တောင်အာဖရိကမှ Forex လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလား။
တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးနေသည်။
တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လိုင်စင်ကိုရယူပါ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ရယူပါ
တောင်အာဖရိကမှ Securities Dealers License ရရှိအောင်သင်ကူညီပေးနိုင်မလား။
Securities Dealers License သည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကတောင်အာဖရိက၏ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်တောင်အာဖရိကအတွက် Securities Dealers လိုင်စင်ကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။
တောင်အာဖရိကအတွက်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကိုရယူပါ တောင်အာဖရိကရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်လျှောက်ထားရန် တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers License ကိုရယူပါ
တောင်အာဖရိကမှ Forex Brokerage License ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါမလား။
Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်သည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကတောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်တောင်အာဖရိကအတွက် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်နှင့်သင်ကူညီနိုင်သည်။
တောင်အာဖရိကအတွက် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ တောင်အာဖရိကတွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ တောင်အာဖရိကတွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ
တောင်အာဖရိကမှ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါမလား။
Forex exchange လိုင်စင်သည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကတောင်အာဖရိက၏ Forex Exchange လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
တောင်အာဖရိကအတွက် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရယူပါ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ
တောင်အာဖရိကမှာ Forex လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ကိုရရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Forex လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိကတွင်လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
တောင်အာဖရိကမှာ Securities Dealers License ကိုလူသိများတဲ့တောင်အာဖရိကမှာ Securities Dealers License ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုရဖို့တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Securities Dealers အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသင်တတ်နိုင်သမျှကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Securities Dealers လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြည့်ဆည်းလျှင်ကူညီနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိကတွင်လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers များလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တောင်အာဖရိက၏ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
တောင်အာဖရိကတွင်သင်၏ Securities Dealers License ကိုရယူပါ တောင်အာဖရိက၌သင်၏ Securities Dealers License ကိုရယူပါ
တောင်အာဖရိကမှာလည်း Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကမှာသိတယ်။
တောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်စုံပါကတောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex အကျိုးဆောင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိကတွင်လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
တောင်အာဖရိကတွင်သင်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ တောင်အာဖရိကတွင်သင်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ
တောင်အာဖရိကမှာလဲ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကမှာဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ။
တောင်အာဖရိက၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူတောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၊ Forex လဲလှယ်မှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသင်တတ်နိုင်သမျှရရှိနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းချိုသာသော Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိပါကကူညီနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိကတွင်လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခြင်းအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တောင်အာဖရိက၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
တောင်အာဖရိကတွင်သင်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ တောင်အာဖရိကတွင်သင်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ
တောင်အာဖရိကတွင်သင်၏ Forex လိုင်စင်ကိုရယူပါ တောင်အာဖရိကတွင်သင်၏ Forex လိုင်စင်ကိုရယူပါ
တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ။
တောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်ရရှိရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသည့်စီးပွားရေးပုံစံရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Forex လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိက၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တောင်အာဖရိက၏ Forex လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
တောင်အာဖရိကမှာ Securities Dealers License ကိုတောင်အာဖရိကမှာ Securities Dealers License ရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်များကိုတောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်၊ အစိုးရ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers License အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တောင်အာဖရိက၏ Securities Dealers License ကိုစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
တောင်အာဖရိကရှိကျွန်ုပ်၏ Securities Dealers License ကိုရယူပါ တောင်အာဖရိက၌ကျွန်ုပ်၏ Securities Dealers License ကိုရယူခြင်း
တောင်အာဖရိကမှာလည်း Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကမှာဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်အာဖရိကရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်စုံပါကတောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိက၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တောင်အာဖရိက၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏တောင်အာဖရိက၌ကျွန်ုပ်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိက၌ရယူခြင်း
တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကတွင်ရရှိခြင်းဟုလည်းလူသိများသောတောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူမည်နည်း။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex လဲလှယ်ရေးအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိက၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တောင်အာဖရိက၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
တောင်အာဖရိကတွင်ကျွန်ုပ်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကတွင်ရယူခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ Forex လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကတွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ Forex လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကတွင်ရယူခြင်း
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခကြေးငွေကဘာလဲ။
တောင်အာဖရိကရှိတောင်အာဖရိက Forex လိုင်စင်အတွက်အဓိကကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အထူးအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers License အတွက်လူသိများသောတောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers License ၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
တောင်အာဖရိကရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်ခ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်ခ တောင်အာဖရိကရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်ခ
တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေအဖြစ်လူသိများသောတောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
တောင်အာဖရိက Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ခ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်၏စရိတ် တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်ခ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ခ
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတောင်အာဖရိကတွင်သတ်မှတ်ထားသည့် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်သည်အဘယ်နည်း။
တောင်အာဖရိက Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ခ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်ခ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ခ
တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | တောင်အာဖရိကရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေများ
အရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းများ - တောင်အာဖရိကတွင်ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း
အလုပ်သမား၊ လူမှုရေးနှင့်မိသားစုသုတေသနဌာန (http://disso.vupsvr.gov.sk/)
ဘဏ္ofာရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.finance.gov.sk/)
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.foreign.gov.sk/)
SITA သတင်းအေဂျင်စီ (www.sita.sk/)
စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.economy.gov.sk/)
အလုပ်ရှင်များအသင်းချုပ် (AZZZ SR) (www.azzz.sk/)
INFOSTAT၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဌာန (www.infostat.sk/)
အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (KOZ) (www.odbory.sk/)
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.health.gov.sk/)
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာ ၀ န်ကြီးဌာန (www.build.gov.sk/)
စလိုဗက်ကန်ဒေသများ (www.region.sk) အကြောင်း
စလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ (ပါလီမန်) (www.nrsr.sk/)
စံနှုန်းများ၊ တိုင်းတာမှုနှင့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာစလိုဗက်ကီးယားရုံး (www.normoff.gov.sk/)
စလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်လမ်းညွှန် (www.slovakia.org) & http://www.slovak-republic.org
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.justice.gov.sk/)
အလုပ်သမား၊ လူမှုရေးနှင့်မိသားစု ၀ န်ကြီးဌာန (www.employment.gov.sk/)
ပတ်ဝန်းကျင် ၀ န်ကြီးဌာန (www.lifeenv.gov.sk/)
ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ စာတိုက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.telecom.gov.sk/)
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဘဏ် ၄၇၁ ခုအတွက်တောင်အာဖရိကအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ။
တောင်အာဖရိကရှိမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတွက်တောင်အာဖရိကတွင်အကောင်းဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့။
နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်တောင်အာဖရိက၏လိုအပ်ချက်များ၊ အခကြေးငွေများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကန ဦး အပ်ငွေစသည်ဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။
တောင်အာဖရိက၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်တောင်အာဖရိကတွင်ဘဏ်စာရင်းအောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားစွာဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးသည်။
တောင်အာဖရိကအတွက်အတွေ့အကြုံရှိသောဘဏ် ၀ န်ဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဖောက်သည်များအားဘဏ်စာရင်းအထောက်အပံ့ပေးသောတောင်အာဖရိကကိုယ်စားလှယ်များ။
တောင်အာဖရိကရှိဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသောတစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးသမားများအတွက်တောင်အာဖရိကတွင်အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း။
တောင်အာဖရိကအတွက်ကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တောင်အာဖရိကတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သင့်အားသင်၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်အာဖရိကအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်ဘဏ် ၄၇၂ ခုအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းပံ့ပိုးမှုများပေးလျက်ရှိသည်။
တောင်အာဖရိကရှိအကောင်းဆုံး fx လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အကြံပေးခြင်း၊ တောင်အာဖရိကရှိ fx လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ fx လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ fx လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ fx လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ တောင်အာဖရိကရှိ fx လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကရှိအကောင်းဆုံး Securities Dealers လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများအတွက် တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကတွင်အကောင်းဆုံး Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံများ၊ Forex အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ တောင်အာဖရိက၏အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ Forex အကျိုးဆောင်လီအတွက်ရှေ့နေများ တောင်အာဖရိကတွင် cense၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကတွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ Forex လဲလှယ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ တောင်အာဖရိကတွင်လိုင်စင်၊ တောင်အာဖရိကရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများလည်းရှိသည်။
တောင်အာဖရိကအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုထုတ်ပေးခြင်း၊ Forex လိုင်စင်။ ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် တောင်အာဖရိက၏